ရာဇဝတ်မှုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမော်ကွန်းတိုက်• ၄၂၀၀ Louisiana ၏ Block
အပေါ် Posted သြဂုတ်လ 7th, 2020
သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင်၊ Virginia Avenue ၏ ၄၃၀၀ နှင့် ၄၄၀၀ မှလုပ်ကွက်များမှနေထိုင်သူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်တွေ့ဆုံကြလိမ့်မည် Starz အလှပြင်ဆိုင်, အိမ်နောက်ဖေးအတွက် 4445 ဗာဂျီးနီးယား။ ဤအိမ်နီးချင်းများသည်စနစ်တကျစည်းလုံးသောကလပ်တစ်ခုတည်ထောင်လိုကြသည်။ ညနေ ၅း၃၀ မှညနေ ၇း၃၀ အထိသင်တက်ရောက်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ အိမ်နီးချင်းများ၊ အခြားအနီးအနားများမှမကြာသေးမီကဖွဲ့စည်းထားသောလုပ်ကွက်များမှဒေသခံများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံပါ DT2 • Downtown Dutchtown နှင့် Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်.
ကျန်ရှိသော“ Dutchtown တွင်လုပ်ကွက်များကိုဖွဲ့စည်းခြင်း” ကိုဖတ်ပါ။
အောက်မှာ Filed လုပ်ကွက် . အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ . လုပ်ကွက်, ရာဇဝတ်မှုနှင့်လုံခြုံမှု, DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown CIDနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ .
ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် သြဂုတ်လ 7th, 2020 .
4200 Louisiana ရာဇဝတ်မှုနှင့်လုံခြုံမှု
Louisiana ၏ 4200 Block ကိုရှာပါ
Louisiana ၏ 4200 ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်ပိုမို